musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » USA Kuputsa Nhau » 8 Kubva gumi veAmerica Vanotsigira Vaccine Passport
Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • Kodzero Dzevanhu • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
81.8% yevaAmerica Vari Kufarira Vaccine Passport
Pfungwa yepasipoti yekudzivirira yave ichikura zvakanyanya mukuzivikanwa.
Ongororo iyi yaisanganisira vanhu mazana mapfumbamwe nemakumi manomwe nepfumbamwe muUS vese vakabvunzwa mibvunzo yakasiyana siyana ine chekuita nemapasipoti ekudzivirira.
Vacheche Boomers ndivo vashoma vanokwanisa kutsigira mapasipoti ekudzivirira.
50.9% yakazara vakapindura vakataura kuti vainyanya kufamba mudzimba nezvinodiwa nepasipoti yekudzivirira.
Mhedzisiro yeongororo ichangobva kuitwa yejekiseni inoratidza manzwiro anoita vanhu vekuAmerican nezvezvirambidzo zvakasiyana zvekufamba zvine chekuita nedenda reCCVID-19.
Nenharo dzinoenderera dziripo dzakanangana nerusununguko rwevanhu uye kugona kufamba vasingavhiringidzike munyika yese, vazhinji vava kutenda kuti humbowo hwejekiseni hunofanirwa kuve chinodikanwa.
81.8% yevaAmerica vakaongorora vakatsigira zano rePacccine Passport, neVacheche Boomers vari vashoma mukana wekutsigira iyi pfungwa.
Ongororo iyi yakaratidzawo kuti chizvarwa chipi chingangopesana nacho pasipoti yekudziviriras uye kuti vese varume nevakadzi vakapindura vanonzwa sei nezvenyaya iyi.
Pfungwa yepasipoti yekudzivirira yave ichikura zvakanyanya mukuzivikanwa. With New York City uye zvikamu zve California ikozvino kupa humbowo hwejekiseni, pamwe nemakambani makuru senge maNorway cruise mitsara, hazvidziviriki kuti mamwe maguta, nyika, nemakambani vachatanga kuita zvakafanana. Uye kunyangwe hazvo mamwe matunhu akaita seFlorida neTexas akarambidza mapasipoti ekudzivirira, ruzhinji rwevanhu rwuri kutanga kujaira zano.
Yakaitwa pakati paJune 2-3, ongororo iyi yaisanganisira vanhu mazana mapfumbamwe nemakumi manomwe nepfumbamwe muUS vese vakabvunzwa mibvunzo yakasiyana ine chekuita ne majekiseni mapasipoti - inotsanangurwa se "gwaro rinoratidza kuti wakabaiwa jekiseni reCVID-19." Vakabvunzwawo nezvezvavanoda zvine chekuita neyakajairika nzira yekurambidzwa kwekufamba, vagari vakaongororwa vanomiririra huwandu hwehuwandu hunosanganisira murume (murume / mukadzi), chizvarwa (Vacheche Boomers / Chizvarwa X / Millennials / Chizvarwa Z), uye avo vakatobayiwa jekiseni nevasina kubayiwa.
Vazhinji vakapindura vaiziva izwi iri passport yekudzivirira, pamwe vangangoita 82% vachitaura kuti ivo zvino vanotsigira zano mune imwe nzira kana imwe. Mhedzisiro iyi yakasungirirwa kune ese zera uye murume, nevakadzi vanosvika 7% vangangodaro kutsigira mapasipoti ekudzivirira kupfuura evarume. Pakati pevasina kubayiwa jekiseni, varume vaiwanzokurudzirwa kubaiwa jekiseni zvichibva pakurambidzwa kwekufamba kupfuura vakadzi.